प्रचण्ड भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभामा वामदेव, अर्थमन्त्रीमा खतिवडाकै निरन्तरता’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१८ चैत्र २०७६, मंगलवार ०१:४० English
चितवन, १६ फाल्गुण । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रियसभामा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम मनोनीत हुने बताएका छन् । प्रेस सङ्गठन नेपाल चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने बताएका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीले सिफारिस नगर्ने कुरा म कल्पना गर्दिन उहाँले गर्नुहुन्छ । मैले त्यति बुझेको छु’ प्रचण्डले भने । प्रधानमन्त्रीले गौतमलाई सिफारिस गर्नुभएन भने के हुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा प्रचण्डले भने, ‘म अहिले त्यतातिर जानै चाहान्न । उहाँले पार्टी सचिवालयको बैठकले सर्वसम्मत गरेको निर्णयलाई अवज्ञा गर्नुहुन्छ भनेर म कल्पना पनि गर्न सक्दिन । कसैले पनि सक्दैन ।’ आफू र प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष ओलीको संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठकले गौतमलाई सर्वसम्मतरुपमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको दाहालको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रियसभामा जानैपर्ने बाध्यता नरहेका कारण छ महिनाका लागि राष्ट्रियसभामा नगएरै पनि डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीमा बहाल रहन सक्ने उनको भनाई छ ।
१६ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १२:५८ मा प्रकाशित